MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2014-05-25
at 5/30/2014 08:55:00 PM No comments:
at 5/30/2014 08:54:00 PM No comments:
at 5/30/2014 10:04:00 AM No comments:
(Lachid Kachin) (Myu tsaw ka sa)
၂၀၁၄၊မေလ၊၂၈ရက်နေ့နံနက်၈နာရီခန့် တွင်ရှမ်းမြောက် KIA တပ်မဟာ (၄)လက်အောက်ခံတပ်ရင်း(၃၆)နယ်မြေဖြစ်သော မုန်ယာ နမ်ဆမ် မှပန်စပ်သို့ တက်လာသော မြန်မာစစ်တပ် အင်အား၁၀၀ ဝန်းဝန်းကျင်ခန့် နှင့်KIA ရင်း(၃၆) တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
KIAတို့ မှလမ်းတွင်ပျောက်ကျားစနစ် ဖြင့် စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး
မိမိတို့ ဘက်မှထိခိုက်ကျဆုံးမှုမရှိကြောင်းနှင့်မြန်မာစစ် တပ်ဘက်မှအထိအ
at 5/30/2014 08:48:00 AM No comments:
စစ်ပွဲကြာရှည်နေရင် ဒုက္ခသည်များအတွက် ပိုပြီး ခက်ခဲလာနိုင်ကြောင်း ဦးဒွဲပီဆာဆို
စစ်ပွဲထပ်ကြာနေပြီး အပြင်က အကူအညီများ မကူညီနိုင်တော့သည့် အချိန်တွေ ဒုက္ခသည်များအတွက် အခက်အခဲ များစွာ ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကေအိုင်အို စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးဒွဲပီဆာမှ ဆိုသည်။
“နောက်နှစ်လောက် ဆိုရင် ငွေးရေးကြေးရေးမပြောနဲ့ ထမင်းချက်ဖို့ ထင်းတောင် အရမ်းခက်လာမယ်။ ထင် ယူစရာနေရာတွေ ပြောင်ကုန်ပြီ။ ဒီမှာက လယ်ယာလုပ်စားဖို့ မြေမရှိဘူး။ ၀င်ငွေရှာစရာ နေရာမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် အခြားအကူအညီ မလာတော့ရင် ဒုက္ခရောက်လာနိုင်တယ်။”ဟု ဦးဒွဲပီဆာမှဆိုသည်။
at 5/29/2014 02:59:00 PM No comments:
at 5/28/2014 07:12:00 PM No comments:
at 5/27/2014 01:17:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲ ရပ်ဖုို့ တောင်း ဆုိုတဲ့ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း တွေပါ။ သူတုို့ အားလုံး မြန်မာနုိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ နွားနုို့ သမ္မတ က ပြည်သူ တောင်းဆုိုသံ နားထောင် တယ် ဆုိုလား.. ဒီနေရာမှာ တော့ ငြိမ်နေတယ်နော်..
2. ကချင်အမျိုးသမီးများ ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်
3. ဗေဒါအင်စတီကျူ (BAYDA Institute)
5. Green Myanmar Environment and Social Network
6. စစ်ကိုင်းဒေသလယ်သမားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ရက် (SRFDN)
7. Civil and Political Rights Campaign Group
at 5/27/2014 12:59:00 PM No comments:
မူဆယ်မှ ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၁ဝဝ ကျော် မိမိနေရပ်သို့ ပြန်
ေKIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့အကြား ဧပြီလက တိုက်ပွဲများကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ဝိုင်းဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှ မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည့် ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၅ဝဝထဲမှ ၁ဝဝကျော်ကို နေရပ်သို့ ပြန်လည်နေထိုင်ရန် စီစဉ်ပေးနေပြီဟု ဒုက္ခသည်များကို လာရောက်ခေါ်ယူသူ ဝိုင်းဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလဘန်ကျော်အောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ဝိန်းဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝိန်းဆိုင်၊ ဘန်ကမ်း၊ ဟိုပန်၊ ခါနန်၊ ဘန်ကမ်း စသည့် ကျေးရွာများမှ အိမ်ထောင်စု ၄၃ စုမှ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်ကို မေလ ၂၆ ရက်တွင် မိမိနေရပ်သို့ ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ကားများ စီစဉ်ပေးနေသည် ဦးလဘန် ဂျော်အောင်က ပြောသည်။
at 5/27/2014 09:18:00 AM No comments:
at 5/27/2014 09:12:00 AM No comments:
at 5/25/2014 08:53:00 PM 1 comment: